हरेक कुरामा नेपालीलाई हे’प्ने ? भारतलाई श’त्रु देश घोषण गर्नु पर्छ : स्वागत नेपाल अधिवक्ता [भिडियो सहित] – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/हरेक कुरामा नेपालीलाई हे’प्ने ? भारतलाई श’त्रु देश घोषण गर्नु पर्छ : स्वागत नेपाल अधिवक्ता [भिडियो सहित]
हरेक कुरामा नेपालीलाई हे’प्ने ? भारतलाई श’त्रु देश घोषण गर्नु पर्छ : स्वागत नेपाल अधिवक्ता [भिडियो सहित]
काठमाडौँ / अहिले नेपाली भूमीमा भारतले मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि चौतर्फी च’र्को बि’रोध भैरहेको छ । भारतले जहिले पनि जे कुरामा हामीलाई नियम बि’परित गरिरहेको छ भनेर जं’गिए अधिवक्ता स्वागत नेपाल । भारतले आज सि’मा क्षेत्रमा जे गरिरहेको छ सबै नेताहरुको लम्पसारबादको कारणले यस्तो भएको हो र भारतलाई श’त्रु देश घोषणा गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन् भिडियो । स्वागत नेपालले भारतबारे बोलेको भिडियो एकपटक हेर्नुहोला ।
साम्राज्ञीले ५ बर्षपछी आफुमाथि भएको ‘दुर्व्यावहार’ बारे बोलिन् [भिडियो]
‘भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्ने, अनि आफै ७० करोडको डिलिङ गर्ने ? सांसदबाटै निलम्बन गर जीवनभर राजनीति गर्न नपाओस